Madaxweyne Siilaanyo oo Shirkii Golahiisa Wasiirada u sheegay War argagax ku riday Wasiiro badan oo Sacab tumayaal ahaa |
Madaxweyne Siilaanyo oo Shirkii Golahiisa Wasiirada u sheegay War argagax ku riday Wasiiro badan oo Sacab tumayaal ahaa
(salaanmedia.com) Shirkii Golaha Wasiirrada Somaliland ee maanta oo uu hoggaaminayey Madaxweyne Siilaanyo, ayaa lagaga Hadlay Qoddobo xaasaasi ah oo aan hore loo arag, kuwaas oo salka ku Haya arrimaha Doorashooyinka dalka kusoo socda.
Sida ay Warbaahinta u xaqiijiyeen ilo xogogaal ah oo katirsan qasriga Madaxtooyada somaliland, waxa shirkaas maanta lagaga Hadlay laba qoddob oo xaasaasi ah, kuwaas oo uu miiska soo saaray Madaxweyne siilaanyo oo toddobaadkan ka yimi safar uu dalka Ingiriiska kaga Yimi.
Ilaha Madaxtooyada ku sugan, ayaa noo xaqiijiyey in madaxweyne siilaanyo Xubnaha Golaha wasiirradiisa uu maanta ku wargeliyey in laga doodo laba qodob oo salka ku Haya doorashooyinka soo socda, kuwaas oo kala ah Warqad ama farriin uu ka sido Bulshada caalamka ee somaliland taageerta oo madaxweynaha kusoo cadaadisay sidii doorashayooyinka soo socdaa ay xilliga loo muddeeyey u qabsoomi lahaayeen, iyo waliba farriin amar u eeg uu madaxweynuhu Xubnaha wasiirrada ah farayo oo ah sidii ay u raadin lahaayeen cod iyo taageero uu madaxweynuhu helo.
Xubnaha wasiirrada ayaa si hufan loogu sharraxay rabitaanka madaxweynaha ee ah sidii ay Guntiga dhiisha iskaga dhigi lahaayeen Keenidda codad lagu gargaaro madaxweynaha xilliyada doorashada soo socota, waxana uu madaxweynuhu ku adkaystay inuu wasiirrada ka doonayo inay kasbadaan Bulshooyinka iyo reeraha ay kasoo jeedaan.
Madaxweynaha ayaa la sheegayaa inuu xataa carrabka ku dhuftay sida aanu kalsooni Buuxda ugu qabin inuu xisbigiisa Kulmiye si hagar la’aan ah ugu ololayn doonin, maadaama uu soo baxay khilaaf shaac baxay oo madaxweynaha iyo Hoggaanka xisbiga dhex yaallaa, waxana ay taasi keentay inuu madaxweynuhu ka aamin ka-baxo Madaxda Kulmiye. Madaxweynaha ayaa la sheegayaa inuu wasiirrada u sheegay in looga Baahan yahay inay qaadaan olole ballaadhan oo deegaanadooda iyo dadkooda kaga dhaadhicinayaan waxqabadka Xukuumadda, isla-markaana ay kaga Hortegayaan baaqyada axsaabta mucaaridka ee ah inaanay xukuumaddu shacabka waxba u qaban oo aanay mudnayn in labaad codka kalsoonida la siiyo.
Golaha Wasiirrada ayaa Hawraarsan ku qaabilay Dalabka madaxweynaha, waxana ay ballan ku qaadeen inaanay inta karaankooda ah waxba ka hagran doonin u ololaynta madaxweynaha, isla-markaana ay dagaal u geli doonaan sidii uu madaxweyne siilaanyo markiisa labaad dalka u hoggaamin lahaa.
Qoddobka kale ah ee farriinta bulshada iyo saaxiibada somaliland taageeraa madaxweynaha u soo dhiibeen, ayaa waxa cabsideeda laga dareemay shirkii maanta ee Golaha wasiirrada, waxana uu madaxweynuhu muujiyey inay warqaddaasi culays ku tahay maamulkiisa, isla-markaana loo baahan yahay sidii doorasho loogu diyaar garoobi lahaa muddada ay u qoondaysan tahay.
Waxyaabaha kale ee iyaguna shirkaas lagu soo hadal qaaday ayaa waxa kamid ahaa Dagaalka ka dhex qarxay xukuumadda iyo Guddoomiyaha Xisbiga waddani, waxana arrintaas la iskula gartay inay xukuumaddu talo kaliya la lahaato, isla-markaana la diyaariyo sidii Guddoomiye cirro meesha looga tuuti lahaa.
Madaxweyne Siilaanyo, ayaa Xubnihiisa Wasiirrada ugu dambayntii u sheegay in shaqadoodu ku xidhan tahay joogitaankiisa, isla-markaana looga Baahan inay shaqadooda ilaashadaan oo ay madaxweynaha taageero laxaad leh uga dhex raadiyaan Bulshada, waxana uu madaxweynuhu faray Wasiirada inay ku gorgortamaan waxqahadka ay wasaaradaha ay xilalka ka hayaan bulshada u qabteen.
Ugu dambayntii waxa lagu ballamay in dhawaan xubnaha wasiirradu ay bilaabaan hawshaas, isla-markaana ay ka daba tagaan dhaawaca ay mucaaridku u geysteen sumcadda xukuumadda, maadaama ay Labada xisbi-mucaarid goor horeba daafaha waddanka ka Bilaabeen Olole xooggan oo xukuumadda ka dhan ah.